Uhlaziyo oluzenzekelayo lweWordPress > UVielhuber uDavid
Uhlaziyo oluzenzekelayo lweWordPress09
I-WordPress iphumeze uhlaziyo lwangemvelaphi ngokwendalo ukusukela kuguqulelo 3.7 kwaye lwasebenza ngokuzenzekelayo ukukhutshwa okuncinci. Ngoncedo lwezihluzi, unokulawula indlela yokuziphatha ngokuchanekileyo, yintoni kanye kanye ehlaziywa ngokuzenzekelayo. Ukufakwa ngokusisigxina, okuzenzekelayo ngokupheleleyo kwazo zonke izinto ezincinci, ezinkulu, iplagi, umxholo kunye nohlaziyo lokuguqulela akujoliswanga, kodwa kungenziwa ngokulula ngenye indlela.
Kukho izinto ezininzi iplagi ezandisa rhoqo apho izaziso ibizwa phezulu yaye, kwezinye iimeko, nabo sithembisa ukwenza kuhlaziyo kanye; Kodwa akukho nanye kwezi plugins iphumelela ngokuthembekileyo. Isixhobo somgca wokuyalela esinamandla WP-CLI sibonelela ngesisombululo esifanelekileyo (hayi esi sizathu sodwa). Emva kofakelo olufutshane , le migca ilandelayo (yenziwe kwifolda yeprojekthi yeWP) iqinisekisa ukuba zonke izinto ezihlaziyiweyo zala macandelo angentla zifakiwe ngaphandle kokukhetha:
I-oneliner elandelayo (enokuthi icuthwe ngokusebenzisa i- alias okanye izixhobo ezinjenge- flimsy ) inokuqhutywa nakweyiphi na iserver ye-SSH (nokuba ngaphandle kwe-WP-CLI efakwe ngaphambili) ukwenzela ukufaka lonke uhlaziyo phaya kwindawo enye:
Iflegi yengcambu evumelekileyo iqinisekisa ukuba iinkqubo zinokuqhuba njengomsebenzisi wengcambu (oku kubalulekile kwindawo yeWSL ). Uhlaziyo lwalo naliphi na icandelo ngaphandle kovavanyo lwangaphambili kwindawo yophuhliso lwengingqi alukhuthazwa phantsi kwazo naziphi na iimeko. Nangona kunjalo, ukuba unendawo ekhuselekileyo ye-WP okanye imeko ekhethekileyo yokusetyenziswa ukuze uhlale unikezelwa ngohlaziyo lwamva nje, yonke loo nto inokuzenzekelayo ngomsebenzi olula wekhron ngendlela yefayile ye-bash:
I-WP-CLI inokwenza okuninzi ngakumbi: ukongeza iindima zomsebenzisi, ukucima izimvo, ukukhangela kunye nokutshintsha imitya kwindawo yolwazi, ukungenisa iifayile zeendaba ... kufanelekile ukujonga amaxwebhu . Okwangoku ndivule imiba emibini ye- Github echaphazela iincukuthu ezincinci kwimodyuli yolwimi , kodwa musa ukuma kwindlela yokusebenzisa kwiindawo ezinemveliso.